Fanondrahana rano mitete ao an-trano: toetra, tombony ary fomba fanaovana azy | Green Renewable
Fanondrahana rano mitete ao an-trano
Ny fanondrahana mitete dia iray amin'ireo rafitra be pitsiny indrindra ankehitriny amin'ny fambolena. Isika rehetra izay manana zaridaina na zaridaina an-trano dia maniry azy hiroborobo amin'ny toe-javatra tsara. Noho izany, afaka mamolavola a fanondrahana rano mitete ao an-trano tena mandaitra. Izy io dia iray amin'ireo rafitra fanondrahana tena mahomby izay misy ary azo amboarina ao an-trano miaraka amin'ireo fitaovana izay tsy ampiasaintsika mahazatra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba tokony hanorenanao ny fanondrahana drip any an-tranonao ary inona no tombony azo avy amin'izany.
1 Tombontsoa amin'ny fanondrahana mitete
2 Rafitra fanondrahana rano mitete ao an-trano
2.1 Tavoahangy misy lavaka
2.2 Tube na tady pvc amin'ny satrony
2.3 Tavoahangy ao anaty loto tsy misy satrony
2.4 Fanondrahana rano mitete avy amin'ny masoandro
Tombontsoa amin'ny fanondrahana mitete
Ho hitantsika tsirairay ny tombony rehetra amin'ny fanondrahana mitete:
fahombiazana: mihena ny rano sy ny etona ary ny fivoahana any anaty raha toa ka mampiasa rafitra fanondrahana mitete isika. Ary io dia raha voalamina tsara, tantanana sy voatazona izy dia manana fahombiazana 95%. Ho fanampin'izany, manampy amin'ny fanondrahana rano kely vitsivitsy izay ahafahan'ny fanapaha-kevitra mahomby kokoa momba ny famokarana.
Fotoam-bokatra: amin'ny voly marobe dia misy ampahany kely amin'ny habetsaky ny tany izay azo hamandoana mba hampihenana ny fatiantoka rano tsy ilaina rehefa voatondraka.
Sorohy ny fisintonana rano sy otrikaina lalina: Rehefa manondraka isan-jato ny rano, dia tsy mivoaka ao anaty sosona lalina kokoa ny otrikaina. Tena zava-dehibe izany raha te hihazona ny tany aman-tanintsika ho salama kokoa isika.
Fanamiana lehibe kokoa amin'ny fampiharana rano: amin'ny fanondrahana rano mitete dia manatsara ny fitoviana amin'ny fanondrahana rehetra ary mety hiteraka fanaraha-maso tsara kokoa ny rano, ny otrikaina ary ny sira mineraly.
Ampitomboy ny famokarana: Misy rafitra mahasoa isan-karazany izay manampy amin'ny fampitomboana ny famokarana sy hampiorenana ny voly manoloana ny toetr'andro samy hafa.
Manatsara ny fahasalaman'ny zavamaniry: Noho io karazana fanondrahana io dia vitsy ny aretina mifandraika amin'ny holatra mitranga noho ny vokatra maina kokoa.
Fanatsarana ny fitantanana ny zezika sy ny bibikely: Misy fiantraikany be loatra amintsika izany raha te hanana zaridaina an-tanàn-dehibe tsy misy fampiharana zezika synthetic sy pesticides.
Fanaraha-maso tsimparifary tsara kokoa: Ny fanondrahana rano mitete dia manampy amin'ny fampihenana ny fitomboan'ny tsimparifary sy ny fitomboana satria mifantoka amin'ny voly ny rano. Izy io koa dia manampy amin'ny fampihenana be ny ezaka fanaraha-maso ny tsimparifary.
Izy io dia ahafahana mamorona vokatra roa: Noho io rafitra fanondrahana rano mitete an-trano io dia hamela ny famafazana vokatra faharoa ary hanatsara ny fahafaha-mamokatra.
automatique: azo mandeha ho azy ny fanondrahana mba tsy hahalala ny fijinjana.
Mitsitsy angovo: Izay tahiry rano rehetra dia hampihena ny vidin'ny angovo ihany.
Longevity: Aza adino fa ny rafitra fanondrahana ao an-trano na mitete dia mety hanana fiainana lava raha toa ka voalamina tsara.
Rafitra fanondrahana rano mitete ao an-trano
Azo antoka fa isan'andro isika dia manary tavoahangy plastika marobe izay tsy misy fampiasana intsony. Ireo tavoahangy ireo dia azo ampiasaina hanamboarana rafi-pitetezana rano mitete tena tsotra. Tavoahangy iray lehibe araka izay tratra fotsiny no ilainay mba hananany fahaizana ambony, zavatra maranitra ary tady na fantsona manify. Amin'ity fitaovana ity dia hanana ny zavatra rehetra ilainao ianao mba hahafahanao manao ny rafitra fanondrahana rano mitete ao an-trano.
Andao hojerentsika hoe inona ireo fiovana samihafa misy:
Tavoahangy misy lavaka
Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana lavaka ao amin'ny fonon'ny tavoahangy amin'ny fanapahana ny fanambaniny ary ampidiriny ambony ambany amin'ny tany, eo akaiky eo. Tsy maintsy ampifandraisintsika koa ny fantsona iray izay misy tsindry rano ambany. Izy io dia rafitra azo ampiharina sy mahasoa indrindra, indrindra raha lavitra ny tranonao mandritra ny fotoana maharitra ianao.
Tube na tady pvc amin'ny satrony
Azontsika atao ihany koa ny mamolavola rafitra fanondrahana rano avy ao an-trano amin'ny alàlan'ny fanaovana lavaka ao anaty satroka ary ampidiro tady hameno ny tavoahangin-drano. Izy io dia rafitra somary manara-penitra izay hanampy antsika hitahiry rano be satria mahatonga ny fakany hisintona ny rano miadana kokoa.
Tavoahangy ao anaty loto tsy misy satrony
Izy io dia iray amin'ireo fomba tsotra sy mahomby indrindra. Mila manao lavaka kely ao anaty tavoahangy fotsiny isika, manala ny satrony ary mametraka azy amin'ny tany mitsangana. Misaotra an'io fa afaka mahazo ny tavoahangin-drano isika ary miandry eto tsikelikely handena ny vokatsika. Izy io dia tsy mitovy amin'ny rafitra fanondrahana rano mitete ao an-trano izay tena mahaliana raha ampiasaina amin'ny zaridaina sy amin'ny tany amin'ny zaridaina.
Fanondrahana rano mitete avy amin'ny masoandro
Ity rafitra ity dia somary be pitsiny kokoa ary hampiasa ny herin'ny masoandro amin'izany isika. Mora ny manamboatra azy ary mamela antsika hamonjy rano be dia be. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mampiasa rano tavoahangy roa isika, lehibe iray mahazaka 5 litatra na mihoatra ary kely kokoa mety 2 litatra. Handeha tsikelikely izahay amin'ny famaritana ny zavatra rehetra tokony hataonao mba hamoronana ity rano mitete ao an-trano ity:
Raisinay ny tavoahangy lehibe ary manapaka azy eo am-potony isika, raha ilay kely kosa tapaka roa.
Ny tapany ambany amin'ny tavoahangy kely dia izay ampiasaina apetraka mivantana amin'ny tany. Ny lehibe dia hapetraka eo amboniny amin'ny fomba toy izany, rehefa manokatra ny satrok'ilay tavoahangy lehibe ianao dia omena ilay kely ilay rano.
Ireo tavoahangy roa ireo dia hapetraka eo akaikin'ny zavamaniry tiantsika hosotroina. Ny halavirana dia tsy tokony ho lehibe loatra ka tsy hisy karazan-dranomasina sisa tavela. Ny fatiantoka an'ity karazana rafitra fanondrahana rano mitete ao an-trano ity dia ny tsy fahombiazan'izy ireo raha mitongilana ny tany.
Mampiasa angovo avy amin'ny masoandro ny rafitra mba hanafoanana ny rano ary hampitodika azy any amin'izay tena mahaliana antsika. Rehefa mitodika mankany amin'ny rafitry ny tavoahangy ny taratry ny masoandro dia miakatra ny mari-pana amin'ny rivotra ka mahatonga ny rano ho etona. Aorian'izay, ny rivotra ao anaty tavoahangy dia hofenoina hamandoana ary ny rano hivezivezy amin'ny rindrin'ny tavoahangy. Araka ny fantatsika, ny vongan-drano dia mihalehibe sy mihalehibe any amin'ireo faritra misy etona foana. Rehefa mihalehibe izy ireo dia milanja bebe kokoa ary miafara amin'ny fikororohana ny rindrin'ny tavoahangy mandra-pahatongan'ny fanaparitahana ny tany manodidina azy ireo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba fananganana rafitra fanondrahana rano mitete ao an-trano ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Fanondrahana rano mitete ao an-trano